Home Wararka Farmaajo oo ku adkeeysanaya in lagu martiqaado (Saudi & Africa Summit)-Abriil 2022
Dowlada Boqortooyada Sacuudiga Careebiya ayaa ku dhawaaqday in ay bisha Abrill ee sanadka danbe ee 2022 ay dalkeeda ku qaban doonto kulanka loogu magac daray – madasha Afrika iyo Sacuudiga. Kulankaan ayaa lagu qaban doono magalaadda Riyad ee dalka Sacuudiga.
Dowlada Sacuudiga ayaa balan qaaday in dalalka Afrika ay ku sameeyn doonto maalgashi cusub kaas oo lagu xalinayo dhibaatooyinka ka dhashay faafida cudurka Karoonaha.
Sadax Asbuuc ka hor ayaa Dowlada Sacuudiga bilaawday in ay casuumaad u dirto madaxda dowladaha Afrika iyada oo ku casuuntay in ay ka soo qayb-galaan kulankaas. Madaama laga yaabo in Soomaaliya yeelato hoagan cusub horaanta sanadka cusub ayaa dowlada Sacuudiga ka gaabsatay inay casuumaad u dirto Farmaajo.
Talabaada ay dowlada Sacuudiga ugu diiday in ay maqti-qaad hordhac u dirto Farmaajo ayaa waxaa ka horyimid Farmaajo, waxa uuna amray safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Sacuudiga in uu codsado, kuna qanciyo dowlada Sacuudiga inay u soo dirto casuumad uu kaga qayb-galayo shirkaas.
Sida laga dhadhansan karo tilaabada uu qaaday madaxweynah waqtigiisa dhamaaday Farmaajo, waxaan shaki ku jirin in Farmaajo uusan marnaba doonaynin uu doorasho xalaala qabto ama uu xukunka ku wareejiyo si nabad ah. Waxaa muuqato inay qorshaha ugu jirin in uu ka dago kurisiga sanadka danbe ama kuwa ka sii danbeeya.
Previous articleFarmaajo oo Qatar ka codsaday in lala heshiisiiyo Kenya! Maxaa soo kordhay?
Next articleMuddaharaad rabshado wata oo xalay ka dhacay Laascaanood (Sawiro)
Kooxo hubeysan oo dad shacab ah ku dilay duleedka magaaladda Gaalkacyo
Dowlada Itoobiya oo ka hadashay booqashada Muse Bixi & xiriirka Farmaajo
Madal looga soo horjeedo Qoor Qoor oo Muqdisho looga dhawaaqey
Cabdifatax Ibrahim (Ronaldo) - January 19, 2022
The UK Parliament on Tuesday debated a motion on whether to recognise Somaliland as an independent nation, even as London rushed to downplay the...
The British parliament is expected to debate a motion entitled “recognition of Somaliland”
Cabdifatax Ibrahim (Ronaldo) - January 18, 2022
The British parliament is expected to debate a motion entitled “recognition of Somaliland” which has been tabled by MP Gavin Williamson. Somaliland seceded from Somalia...
War Xanuun Badan: NISA oo sheegtay inay Hayso Dalkii soo Ababulay...
W/Waxbarashada oo Cudurdaar raqiis ah ka bixisay bedelka soohdinta Badda “RW...